MUUQAAL & SAWIRRO: Warkii sheegayay in xafladdii Khayrre loo diidey calanka Somalia oo qayb ahaan beenoowdey! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka MUUQAAL & SAWIRRO: Warkii sheegayay in xafladdii Khayrre loo diidey calanka Somalia...
MUUQAAL & SAWIRRO: Warkii sheegayay in xafladdii Khayrre loo diidey calanka Somalia oo qayb ahaan beenoowdey!
(Oslo) 21 Juun 2018 – Waxaa xalaytoole magaalada Oslo ee caasimadda Norway ka dhacday xaflad lagu casuumey Wasiirka Koowaad ee Somalia.
Yeelkeede, waxaa xafladdaasi naga soo gaarayay war ay nasoo gaarsiiyeen ka qayb galayaal meesha joogey oo ku aaddanaa in calanka Somalia loo diidey xafladdaasi, in heesta qaranka la diidey iyo xitaa in banaanka loo saaray TV-ga ku hadla codka dowladda ee SNTV.
Si kastaba, dad ka tirsan qaban qaabiyayaasha ayaa Hadalsame u sheegay inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya in la diidey astaamaha qaranka Somalia, iyagoo soo gudbiyay muuqaallo iyo sawirro muujinaya calanka oo dhex yaalla madashii shirku xalay ka dhacay.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA….
Previous articleTOOS u daawo: France vs Peru – LIVE (Shaxda Sugan)
Next articleHaamo la sheegay inay kusoo caariyeen xeebta Liido oo noqday wax ka fog wixii loo maleeynayay + Sawirro